Banky iraisam–pirenena: drafitra lasitra ho an’ny tontolo iainana | NewsMada
Par Webmaster Two sur 20/07/2018
Nivoaka ny 17 jolay teo ny drafitrasa lasitra mirakitra ny paikady ho an’ny tontolo iainana sy ny sosialy novolavolain’ny Banky iraisam-pirenena (BM). Hita ao anatiny ny fenitra vaovao mifehy ny tontolo iainana sy ny sosialy hampihariny amin’ireo tetikasa hovatsiny vola, manomboka amin’ny oktobra 2018 ho avy izao.
Nambaran’ny tompon’andraikitry ny asan’ny BM aty Madagasikara, Rtoa Coralie Gevers, fa « tsapanay matetika fa maharitra sy miantraika any amin’ny fampandrosoana ny fandaharanasa tohananay rehefa arovana ny tontolo iainana sady ampandraisina andraikitra ny mponina eny ifotony, ahafahana mahazo vokatra tsara sy maharitra ». Izay ny nahatonga ny Banky iraisam-pirenena namolavola drafitra lasitra vaovao hanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny sosialy hampiasaina amin’ireo tetikasa tohanany isaky ny firenena.
Novolavolaina nandritra ny efa-taona ity drafitrasa lasitra ity, nifampidinihana sy nakan-kevitra tamin’ny mpisehatra maherin’ny 8.000 tamin’ny firenena 63 ka anisany i Madagasikara. Nifampidinihana tamin’ny fanjakana, ny teknisianina amin’ny fampandrosoana, ny firahamonina sivily, ny fikambanana tsy miankina, sns.
Raisina ny fitarainan’ny mponina
Anisan’ny misongadina ao anatiny ny fandrindrana ny fepetra iarovana ny tontolo iainana sy ny sosialy raisin’ny Banky iraisam-pirenena miaraka amin’ireo rafi-pampandrosoana mba hisian’ny mangarahara bebe kokoa. Hapetraka ny tsy hisian’ny fanilikilihana na fanavakavahana ny fandraisana anjaran’ny vahoaka sy hahatsapany ny vokatra ka nohamafisina ny fitantanana ny fitarainana voaray.
Singa vaovao hita ao anatiny koa ny fepetra hiarovana amin’ny antsipiriany ny mpiasa, tsy manavakavaka, ny fahasalamana, ny fiarovana ny aina, ny fanajana ny zon’olombelona, ny vonjy taitra, ny aro loza, ny fampandraisana anjara ny mpisehatra rehetra ao amin’ny tetikasa, sns. Hosoloina tsikelikely an’ity drafitra lasitra ity ny nisy hatramin’izay.